An-jatony maro no voaroaka avy amin'ny doro tanety an'i Sardinia rehefa mangataka fanampiana amin'ny Vondrona Eropeana i Roma
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » An-jatony maro no voaroaka avy amin'ny doro tanety an'i Sardinia rehefa mangataka fanampiana amin'ny Vondrona Eropeana i Roma
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany Italia • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
An-jatony maro no nafindra avy tao anaty doro ala Sardinia raha nangataka fanampiana avy amin'ny UE i Roma
Ny alatsinainy teo dia mbola nirongatra ihany ny afo tamin'ny faran'ny herinandro teo akaikin'ny tanàna Sardinia 13 farafaharatsiny, na dia teo aza ny ezaka nataon'ny fiaramanidina mpamono afo sy mpamono afo miisa 11 farafahakeliny.
Nandravarava an'i Sardinia any Italia ny doro tanety.
Mponina sy mpizahatany an-jatony no nifindra toerana noho ny loza mananontanona.
Nangataka fanampiana avy amin'ny vondrona eropeana ny governemanta italiana hiadiana amin'ny doro tanety ala any Sardinia.
Ala sy tany maherin'ny 20,000 hektara (50,000 hektara) no potika ao amin'ny nosy Italiana Sardinia rehefa nirongatra ny afobe Montiferru any amin'ny ilany andrefan'ny nosy. Ireo valanaretina koa dia niitatra niantsinanana hatrany amin'ny faritanin'i Ogliastra.
An-jatony ireo nafindra toerana tamin'ny doro tanety tany Sardinia rehefa nangataka fanampiana avy amin'ny UE i Roma
Ny governoran'ny faritra, Christian Solinas, dia niantso azy io ho “loza tsy nisy ohatra teo alohany” raha nampiditra toe-javatra vonjy maika izy ny alahady.
Ny rindrin'ny afo mihetsika manaraka ny tehezan'ireo tendrombohitra ao Sardinia ary mihidy amin'ny tanàna kely sasany, satria setroka setroka mainty no namono ny lanitra teo amboniny. Ny baomba ataon'ny mpamono afo dia nanapoaka ny afo ny metatra miala ny trano fotsiny.
Mponina sy mpizahatany an-jatony no nafindra monina manerana ny nosy satria nitady hiaro azy ireo amin'ny loza mananontanona ny tompon'andraikitra.
Raha ny mpiady sy ny mpamaly voalohany miady handresy ny afobe izay mirehitra mandritra ny andro fahatelo, dia mangataka fanampiana amin'ny Vondrona Eropeana ny vondrona eropeana.
Tsy mbola nisy maty na naratra hatreto fa ondry aman'osy, osy, omby ary kisoa an-jatony no maty tao anaty afo satria voafandrika tao anaty trano fitahirizam-bokatra tany amin'ny làlan'ny afobe. Ny alatsinainy teo dia mbola nirongatra ihany ny afo tamin'ny faran'ny herinandro teo akaikin'ny tanàna Sardinia 13 farafaharatsiny, na dia teo aza ny ezaka nataon'ny fiaramanidina mpamono afo sy mpamono afo miisa 11 farafahakeliny.
Ny ezaky ny sampan-draharaha vonjy taitra dia voasakantsakan'ny rivotra mahery sy mafana mifofofofo manerana ny nosy. Ny alahady dia nangataka fanampiana tamin'ny firenena eropeana i Italia tamin'ny fiatrehana ny afo ary niantso manokana azy ireo handefa fiaramanidina mpamono afo manokana. Ho valin'izany, nanaiky ny handefa fiaramanidina efatra Kanadair hanampy an'i Italia i EU. Ny roa amin'izy ireo dia nomen'i Frantsa ary iray hafa i Gresy.
"Mandritra ireo fotoan-tsarotra ireo dia miara-mijoro isika", hoy ny praiminisitra grika Kyriakos Mitsotakis tamin'ny sioka iray ny Alatsinainy teo, raha nanambara ny hetsika izy.